WAR CUSUB: Man City oo doonaysa inay afduubto heshiiskii Antonio Rudiger & Chelsea – Gool FM
WAR CUSUB: Man City oo doonaysa inay afduubto heshiiskii Antonio Rudiger & Chelsea
(London) 02 Luulyo 2017 – Aayaha Antonio Rudiger ayaan weli dhan u dhicin, xilli ay Roma la heshiisey kooxda Chelsea, balse ay hardanka soo gashay Manchester City.
Labada naadi ayaa la sheegayaa inay Jimcihii isku raaceen heshiiska, iyadoo Antonio Conte uu wax ku dhameeyay €33m oo lagu daray €5m oo ah bareemiyo la xiriirta bandhiggiisa.
Laacibka ayaa lagu wadey inuu caafimaadka maro middood Talaadada ama Arbacada, kaddib marka uu Rudiger ka faraxasho final-ka Confederations Cup Final oo ay Jarmanku caawa Chile kula dheelayaan Russia.
Yeelkeede, wararka ka imanaya Ingiriiska ee ay qorayaan Sunday Mirror, Daily Star ayaa sheegaya in Manchester City ay ka go’an tahay inay fellis u rogto xaaladda.
Walaalka Rudiger ayaan weli wax heshiis ah la gaarin Chelsea, sidaa darteed weli arrintu qayb ahaan way furan tahay, iyadoo haddii maareeyaha Giallorossi jaalle Monchi uu dhowr milyan oo dheeraad ah ka dhiijin karo kooxaha jeebka wayn ee Premier League aysan uga darayn Roma.
XOG: Hakan Çalhanoğlu oo berri ama Isniinta Milano soo gaaraya si uu caafimaadka u maro (Daawo)
Man City oo doonaysa inay maskaxda Dani Alves u adeegsato helista Dybala